Uhlobo olusha phambili emgodleni zokuzivikela ayinakho emikhonweni - China Shandong Chen lu
Action: Ukuvikelwa ngemisebe
Okulingana Lead :: 0.35mmpb
sebhithi :: L, M, S
HA08 zokuzivikela emgodleni isiketi (ubuso olulodwa ngaphandle imikhono)
Non-emikhonweni radiology Ukuvikelwa isiketi / ukuhola imodeli suit: HA08
It is ikakhulukazi esetshenziswa ukuze kuvikeleke-X-ray, futhi umsebenzisi angakhetha uchungechunge Ukuvikelwa nemingcele ezahlukene kanye Ukucaciswa njengomzali kuye ngesidingo. (Ukuvikelwa gamma ray ngokuvamile 0.5 MMPB).
Usayizi ezizenzakalelayo lokhu dress Usayizi medium. Uma kukhona ezinye izimo, intengo izokhuphuka, ukujabulisa kokubonisana ethize!
Radioprotection isiketi anti-lead izingubo ngamazwe entsha zokuzivikela phambili ikhava
Namuhla, ultralight kakhulu, ultra-nomzimba omncane futhi ultra-soft izinto Ukuvikelwa emhlabeni; Kuqhathaniswa efanayo amazwe izingubo phambili, isisindo isihlobo 25 kuya kwangu-30 zingancishiswa.
- ray amasudi zokuzivikela babe kakhulu izakhiwo zokuzivikela
Ukusatshalaliswa phambili kakhulu iyunifomu kanye nokusetshenziswa ezivamile lomthofu akuyona attenuated. Nikeza 0.35 / 0.5mmPb okulingana phambili; Gqoka nemithi, ama-ahlanzekile lula ebusweni izinto ukuvikela utshalomali yakho kuze kube sezingeni esiphezulu;
Entsha isakhiwo ukuklanywa ray overskirt zokuzivikela anti-lead isudi
Wenziwe multi-ungqimba izinto, kanye professional womuntu isakhiwo design, okwenza uzizwe ukhululekile.
Precision senqubo yokukhiqiza
bewumsebenzi Enkulu, ngokucophelela, okuhlala, ake usebenzisa qiniseka;
Ray suit lokuvikela ingubo zokuzivikela
Isitayela woqobo ezihlukahlukene kuqedile
Rich ngobukhulu, kungakhathaliseki wena amafutha mncane, abade futhi short, njalo ofanele ngawe, njani umsiki ngawe; A izitayela kweshumi, imibala ezicebile ingakhethwa, bakhiphe ngokuphelele ubuntu bakho.
Previous: Chen lu sika ivesti ngemisebe-ubufakazi has ukusebenza okuhle olulodwa Emaceleni zokuzivikela
Olandelayo: entsha phambili zokuzivikela iraba cap Chen lu sika kungenziwa amakhastama nezinye okulingana
China Zezıhlabane Yamadivayisi Kushisa bhé kule ndawo Skirt
IsiShayina X-Ray Avikelayo Skirt
Izibhedlela Sebenzisa Rubber Lead Skirt
Izibhedlela Sebenzisa X-Ray Skirt
Ngenisa Material Avikelayo Skirt
New Avikelayo iDemo Skirt
New Split Avikelayo emgodleni Skirt
New Uhlobo Of Avikelayo Skirt
Ukuvikelwa x-ray phambili Skirt
Avikelayo Medical Skirt
Skirt Avikelayo Nge Ngenisa Material
Kushisa bhé kule ndawo Lead Skirt
Soft Avikelayo Skirt
Soft Split Avikelayo Skirt
Hlukanisa Avikelayo Skirt Nge Ngenisa Material
Super Soft Avikelayo iDemo Skirt
Super Soft Split Avikelayo Skirt
X-Ray Avikelayo iDemo Skirt
X-ray Avikelayo Skirt
Chen lu esisha semi emikhonweni olulodwa Emaceleni i ...